BASOLA ABAKWEZINYE IZINDAWO NGOKULAHLA UDOTI – Sivubela intuthuko Newspaper
Imfucuza elahlwa eduze komfula eNtuzuma
UMPHAKATHI was Ntuzuma esigcemeni sakwa-E eThekwini uthi abantu bakwezinye izigceme sebephendule indawo yabo yaba ikhaya lezibi nemfucuza nokwenza ukuba kube nephunga elingabekezeleleki.
Bathi nakuba umasipala weTheku uwuqoqa udoti njalo ngolwezithathu kodwa abanye abantu sebephendule lendawo enomfula ohamba ngaphansi kwebhuloho elincane ku- Amanqe Avenue indawo yokulahla udoti okubalwa nokudla osekubolile, izinto zokwakha kanye nefenisha endala.
Ekhuluma nesiVubela Intuthuko uNks Sthe Gumede uthe lodoti ungadala ukuba abantu bagule njengoba kulahlwa yonke into nje kanti kubuye kudlale nezingane eduze kwalendawo.
“Akuhlukumezeki abantu kuphela ngalemfucuza, nezilwane zasendle nazo ziyahlukumezeka njengoba lemfucuza isikapakele ngisho emanzini. Siye sibone izinhlobo ngezinhlobo zezimoto abantu bezolahla nezinto zokwakha nenhlabathi imbala. Umasipala kumele kube nemizamo oyenzayo ukunqanda lesimo ukuthi singabhebhezeleki. Siyacela ukuba umasipala uyibiyele lendawo noma fake isexwayiso sokuthi kungalahlwa isinoma ikanjani olahlayo uzojeziswa,” kusho uNks Gumede
Umphakathi ukhala ngokuthi abantu bakwezinye izindawo asebephendule lomfulo waba indawo yokulahla udodti Izithombe: Nokulunga Majola
Elinye ilunga lomphakathi uMnuz Sandile Nsele uthe unyanka nonyaka imfucuza iya ngokwanda kanti nephunga elibi alisabekezeleleki. “Kwesinye isikhathi ufica izimoto zimile zichitha imfucuza uxakeke ukuthi abakwenzi ngani ezindaweni zabo,”kusho uMnuz Nsele.
Uthe akaqondi kungani kusuke abantu bakwezinye izindawo bezolahla kulendawo ngoba bona bengabendawo abakwenzi lokho ngoba bayabazi ubungozi bokulahla imfucuza noma ikanjani. “Lento iyinkinga kakkhulu njengoba sezaba ningi kangaka izifo ezitholakalayo sizizwa singaphephile ikakhulukazi izingane ezibuye zidlale khona. Kungaba icebo elihle ukuthi ibiywe lendawo ukuvikela ubungozi obungaba khan,” kasha uMnuz Nsele.
Okhulumela umasipala weTheku uMnuz Msawakhe Mayisela uthe umasipala uzoluphenya loludaba ebese labo abatholakala belahla imfucuza ngokungekho emthethweni banikwe izexwayiso.
“Umphakathi awunazo izizathu zokulahla imfucuza ngokungekho emthethweni. Umasipala weTheku unezindawo eziningi ezisemthethweni umphakathi ongazisebenzisa ukulahla imfucuza,” kusho uMnuz Mayisela. Uthe uMkhandlu weTheku unamasu amaningi okuvikela ukulahlwa kwemfucuza okungekho emthethweni. Sikholelwa ekubeni nemiphakathi echumayo, futhi nendawo ehlanzekile ibaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi sinemiphakathi enempilo, ”kusho uMnuz Mayisela.
Ubuye waveza ukuthi emizamweni yabo yokugcina idolobha elihlanzekile, bagqugquzela izakhamizi ukuthi ziqhubeke nokubika ngokulahlwa kwemfucuza okungekho emthethweni ku-031 311 8804 futhi bazibophezele ngokuqinisekisa ukuthi izindawo abahlala kuzo zigcinwa zihlanzekile ngokunakekela imvelo hhayi ukungcola. “Siphinde sinxuse bonke abahlali ukuthi babe ngabanqobi bezinguquko futhi bayeke ukungcolisa, ukulahla imfucuza ngokungemthetho noma ukushiswa kukadoti okungahloniphi impilo yabanye,” kusho uMnuz Mayisela.